16 jir loo magacaabay Gudoomiye Degmo. – Marqaanmedia24.com
16 jir loo magacaabay Gudoomiye Degmo.
March 18, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 1
Faysal Cabdulaahi Cumar oo ah 16 sano jir ah dhigta Fasalka 4aad ee Dugsiga sare oo ku yaal Magaalada Jowhar ee xarunta Maamulka Hirshabeelle ayaa dhawaan loo magacaabay Gudoomiye ku xigeenka dhanka arimaha Bulshada ee degmada Gamboole ee Gobolka Sh/Dhexe.
Wiilkaan yar ayaa lagu magacaabay wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka arimaha gudaha ee Maamulka Hirshabeelle.
Faysal Cabdulaahi Cumar oo wareysi gaar ah siiyay Warbaahinta ayaa tilmaamay in lamagacaabay isaga oo aan ogeen, mar qur ahna ka warhelay in xil loo magacaabay, wuxuuna meesha ka saaray in lagu war giliyay in xilkaas loo magacaabayo, wuxuu sidoo kale sheegay in uu aad ula yaabay sida fudud ee loogu magacaabay xilka Gudoomiye ku xigeenka dhanka arimaha Bulshada ee Degmada Gamboole ee G.SH/dhexe wuxuu kalo uu tilmaamay in xilalka hadda loo maro dhibaato badan oo lagu bixiyo lacago badan, laakiin isaga aanu ogeen waxa sababay in xilkaas loo magacaabo.
Wiilkaan ayaa ugu dambeyn ugu mahadciliyay maamulka Hirshabelle magacaabista ay u magacaabeyn Gudoomiyaha Degmada Gamboole ee Gobolka Sh/Dhexe, wuxuuna sheegay in uu xilkaas iska Casili doono maalmaha Soo socda, kadib markii uu sheegay in uusan awoodin gudashada Xilkaas loo magacaabay.
Madaxweyne Farmaajo oo ka baaqday Safar uu ku tagi lahaa dalka Qadar.
Da’ iyo midab ma leh dadnimada iyo kartidu.faysal Cumar haddii uu istaahilay jago sare ee dawladeed isagoo jira 16 sano la yaab ma leh oo wuu u qalmaa in uu qabto jagadaas loo magacaabay.Hase ahaatee aniga ilama qumana in uu Faysal qabto jagadaas.Waayo waxuusan ammaan ka helay Shabaab habaar qabayaal.Gobalka uu Faysal joogana waxuu ka mid yahay meelahay ay shabaab ugu badan yahiin soomaaliya